★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်မတွေကို သနားရမလား?
မွတ်ဆလင်တွေက အရူးတွေပဲ။ သူတို့တွေကိုယ်တိုင် ဘာတွေလုပ်နေလဲ သတိမထားမိဘူး။ ကုလားတွေဟာ တချိန်တုံးက ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မွတ်ဆလင်ဖြစ်သွားလဲ သမိုင်းစာအုပ်တွေ ဖတ်ကြည့်ပါ။ မွတ်ဆလင်စစ်တပ်တွေဟာ ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ကုလားဒေသကို ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ဓါးမိုးပြီး ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ မပြောင်းတဲ့ ကုလားတွေ အများကြီး သတ်ခံရပါတယ်။ အသက်မသေပဲ မွတ်ဆလင်ဝင်ပြောင်းခဲ့တဲ့ ကုလားတွေ ချမ်းသာခွင့်ရမယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ စစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ လင်ရှိမယားတွေလဲ မုဒိမ်းအကျင့်ခံရတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင် ကုလားတွေရဲ့ အဖွားတွေဟာ မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ ကုလားမတွေရဲ့ မြေးမြစ်မွတ်ဆလင်တွေ ဘာလုပ်လဲကြည့်ပါ။ အခုတော့ သူတို့အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ၀ါဒကြီးကို အသက်ပေးကာကွယ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်နေပါပြီ။ ဟား. . . . ဟား.. စဉ်းစားကြည့်နော်။ အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ မုဒိမ်းကောင်အတွက် မွတ်ဆလင်တွေ အသက်စွန့်မယ်ဆိုတာ သိပ်ပြီး ရူးလွန်းရာ မကျဘူးလားကွာ? မွတ်ဆလင် အထီးနဲ့ မွတ်ဆလင် အမပါ နှစ်မျိုးစလုံးက ရူးတာချင်းအတူတူပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကုလားအထီးတွေက သူတို့ အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အာရပ်တွေကို အောက်ကျို့ဆက်ဆံရတယ်။ ကုလားမတွေက ပိုပြီး အဖြစ်ဆိုးပါတယ်။ အရာရာမှာ ဖိနှိပ်ခံရပါတယ်။ ဖိနှိပ်ခံရရုံတင်မကပါဘူး။ လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ အများကြီး အလုပ်ခံရပါတယ်။ အဲဒါလည်း ယုတ်ညံ့ ၀ါဒကြီကို အကောင်းမြင်တုံးပဲ။
မွတ်ဆလင်မတွေမှာ ခြေနှစ်ချောင်း လက်နှစ်ချောင်းပါနေတဲ့အတွက် လူလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဘ၀ဟာ တိရိစ္ဆာန်နဲ့မခြား ပါဘူး။ အမြဲတမ်း အနှိမ်ခံပါပဲ။ သူတို့လေးတွေမှာ ကလေးဘ၀ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းပျော်ပါးဖို့ အချိန်မရပါဘူး။ ၆ နှစ် ၇ နှစ်လောက်ဆိုရင် သူ့တို့ အဖေနဲ့ အမေ ကိုကြောက်နေရပါပြီ။ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်လို့ ကြောက်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေနဲ့ အမေပေါင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့်တတ်လို့ပါ။ တလောက တင်ပြတဲ့ ၇ နှစ်သမီးလေးကို စအိုကနေ အဖေက မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ သတင်းထဲမှာဆိုရင် ဆရာဝန်ဟာ ကလေးကို မိခင်ထံပြန်ပို့ဖို့တောင် မလုပ်ရက်ဘူးလို့ ရေးထားတာ သတိပြုမိမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီကိစ္စအမေဖြစ်သူ မကူညီပဲ အဖေက သမီးအရင်းကို စအိုကနေ မုဒိမ်းကျင့်လို့ မရပါဘူး။ မွတ်ဆလင်မိသားစုမှာက အစ်ကိုတွေနဲ့ ဦးလေးတွေကလဲ အဆင်ပြေသလို ကြားကားဆွဲလေ့ ရှိပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကြေကွဲဖွယ် သတင်းဗီဒီယိုလေးနဲ့ စတင်ပါရစေ။ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒအောက်မှာ အရမ်းကိုသနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ယောကျားတွေဟာ မိန်းမ ၄ ယောက်အပြင် အပျော်မယားထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် တခြားဘာသာဝင် မိန်းခလေးတွေကိုလဲ ယူချင်သလိုယူခွင့်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အနောက်ဖက်မှာလဲ ကုလားတွေရဲ့ လိမ်ညာ အပျော်ကြံမှုကို အဖြူမလေးတွေလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အခုဗီဒီယိုမှာတော့ မွတ်ဆလင်အဖေဟာ သမီးဖြစ်သူတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ကိုလဲ ကြည့်ပါ။ Sarah (17 နှစ်) နဲ့ Amina (18 နှစ်) တို့ဟာ လူငယ်တွေ သဘာဝ အလျောက် ချစ်သူထားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ Jesus ကို ယုံကြည်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း လိမ်ညာ ပြောဆိုပြီး ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုရအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ခရစ်ယာန်ကို နည်းနည်းလေးမှ ကြည့်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်အဖေဟာ သူ့သမီး ခရစ်ယာန်နဲ့ ၇ည်းစားဖြစ်တော့ ဘယ်လို အပြစ်ပေးလဲ လေ့လာကြည့်ပါ ။ ရှေ့ဆက်မပြောခင် ကုလားတွေရဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် မြန်မာလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ကုလားတွေကို ပလီကနေဆုချပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှ မဟုတ်ပါဘူး ခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲ အဲလို ဆုပေးတဲ့ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ (ခရစ်ယာန်မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်သူကို ဆုပေးသည့် အကြောင်း ၀န်ခံချက်ဆောင်းပါး ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။) ခရစ်ယာန်မိန်းခလေးနဲ့ မြန်မာမလေးတွေဟာ သူတို့လက်အောက် မှာ တိရိစ္ဆာန်လိုပြုမူခံရပါတယ်။ (ဒီမှာဆောင်းပါးဒီမှာဖတ်ပါ။ ကို Senior Allah ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း အရမ်းကို လေးစားပါတယ်။ စာဖတ်နေတဲ့ခင်ဗျား လည်း လက်တွေ့ကျကျ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်ပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်)
ကုလားမနဲ့ ခရစ်ယာန်ယောကျားလေး လူငယ်ချင်းမေတ္တာမျှတော့ ကုလားဘာလုပ်လဲလဲကြည်ကျရအောင်ပါ။ ခရစ်ယာန်ယောကျားလေးဟာ ကုလားမလေးကို ဖျက်ဆီးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းကလဲ အဲဒီ အတွက် ဆုငွေ မပေးပါဘူး။ ငါတို့ဆိုရင် သူများဘာသာဝင်တွေကို မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာပဲ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ . . . ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်လို့ မွတ်ဆလင်တွေက တွေးမယ်ထင်သလား? ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖေက သူ့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးကို သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သတ်ပြစ်တာ ရိုးရိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မသတ်ခင် သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ (ဆေးစစ်ချက် မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်) သေခါနီးမှာ 911 ကို ဖုံးခေါ်ပြီးပြောသံလေး နားထောင်ကြည့်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ .. မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန် Texas မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ခွေးနဲ့ မနှိုင်းသင့်ပါဘူး။ ရက်စက်ပုံကတော့ ခွေးထက်ဆိုးလို့ပါ။ ကနေဒါမှာ ၁၆ နှစ်သမီးလေးကို Hijab မ၀တ်လို့ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်ခတ်တဲ့ကိစ္စ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ အဖေနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူက ပူးပေါင်းပြီး သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကြားတော့ တချို့ကတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ မျက်ရည်ကြပါတယ်။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဗျာ။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီးရှိနေတရွေ့ ဒီဇတ်လမ်းတွေကတော့ ရှိနေမှာပဲမဟုတ်လား?
ဒီတစ်ခုကလည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင် 10% ပဲရှိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်တာပါ။ မိန်းခလေးဆိုတာ လှပချင်တာ သဘာဝပါဗျာ။ ၁၁ နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့ ကောင်မလေးက နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတာ ဘာဖြစ်လဲနော်? အဲဒါ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ပြစ်တယ်။
မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ ယောကျားဖာသည်ဟာ အသက် ၅၁ နှစ်မှာ ၆ နှစ်အရွယ် Aisha ကို ယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အားကျပြီး မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းခလေးတွေကို မိန်းမလုပ်ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မိဘတွေကလဲ သမီးဆိုရင် ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲ သဘောထား ပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို နည်းနည်းလေးမှ ဂရုမမှုပါဘူး။ အခုတင်ပြမယ့် ဗီဒီယိုကတော့ 12 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ မိန်းခလေးဟာ သူ့ယောကျားက ညှင်းပန်း နှိပ်စက်လို့ ငိုယိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ညှင်းပန်းတာ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်တယ် မထင်ပါနဲ့။ ဓါးနဲ့ထိုးတာပါ။ ၁၂ နှစ်အရွယ်ဆိုတာ ကာတွန်းလေးတွေ ကြည့်ပြီး ရယ်ရယ်မောမော နေရမယ့် အရွယ်ပါဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ 12 နှစ် အရွယ်မှာ ဘာလုပ်လဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မွတ်ဆလင်မတွေကတော့ လင်ယူ သားမွေး လုပ်နေကြပါပြီ။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ စာမတတ်ပေမယ့် ဗုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲ သိပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ လူတွေက ဥာဏ်မရှိပေမယ့် အက်ဆစ်ကိုတော့ လူသတ် လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရကြောင်း သိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို အက်ဆစ်ပက်ပြီး ဖျက်ဆီးတာ မကြာခဏာပါပဲ။ အခုဗီဒီယိုမှာဆိုရင် ပါကစ္စတန်က အမျိုးသမီးလေး အက်ဆစ်ပက်ခံရလို့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလလဲဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းထဲမှတော့ အမျိုးသမီးလေးဟာ ယောကျားဖြစ်သူက မထောက်ပံ့လို့ သူ့ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေစားသောက်ရပါတယ်။
သူရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေတွေ အများကြီးကိုပေးပြီး သူ့ကလေးတွေကို ရအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယောကျားဖြစ်သူက ငွေတော့ယူတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမရဲ့ မျက်နှာကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ပါတယ်။ သနားပါတယ်ဗျာ။ အဲလိုအဖြစ်မျိုး တစ်နှစ်ထဲမှာ ခုနှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်ဆိုပဲ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အဖြစ်လေးကိုကြည့်ပါဦး။ ဘာမှတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး။ ခွေးကုလားတွေ အကြောင်းပြောရင် ဆဲချင်တဲ့စိတ်ကို မထိမ်းနိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ။
ရိုဟင်ဂျာ ဗီဒီယိုမှာ မျောက်မျက်နှာနဲ့ ပလီဆရာကြီး မျက်ရည်ကျတာ မှတ်မိပါသလား? ကုလားတွေက ဟန်ဆောင် မျက်ရည်ကျဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။ ယောကျားတွေ ဖြစ်ပြီး အရမ်းအမြင်ကတ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မတချို့ ကတော့ မျက်ရည်ကျဖို့ မျက်လုံးတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ အာဖဂန်မှာ မိန်းခလေးတွေ ကျောင်းတက်ရကောင်းလားဆိုပြီး ကုလားတွေက ကျောင်းသူ တွေကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလားကတော့ ထုံးဆန်အတိုင်း မွတ်ဆလင် ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ငြင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်စက်မှုတွေကတော့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာပဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခုကတော့ အီရန်မှာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ Ameneh Bahrami ဟာ ရည်းစားကို လက်ထပ်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါအတွက် တန်ဖိုးကတော့ ချစ်သူက အက်ဆစ်နဲ့ ပက်လို့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူက မွတ်ဆလင် ဥပဒေနဲ့ အညီ သူ့ရည်းစားကို ပြန်ပြီး အက်ဆစ်နဲ့ ပက်ခွင့် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးက လက်စားချေခွင့် ပေးမယ်ဆိုပဲ။ နောင်မှာ အဲလိုမလုပ်ရဲအောင်လို့ဆိုပြီး လက်စားချေခွင့် ပေးတာ လို့ပြောပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ့မှာ အဲလို မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် တရားစီရင်ရေးစံနစ်တိုင်းမှာ မျက်မြင်သက်သေ အတုလုပ်တာတွေ၊ တရားသူကြီး လဒ်စားတာတွေနဲ့၊ တရားခံနဲ့ တရားလိုတွေရဲ့ လိမ်ညာမှုကြောင့် အမှုမှန်ဆိုတာ ရှာဖွေလို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောတာ မယုံရင် အနောက်ဖက်နိုင်ငံက ရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့၇င်မေးကြည့်ပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ရသလို တရားခံအစစ်ရှာတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒီတော့ မျက်လုံးတစ်လုံးကို မျက်လုံးတစ်လုံးပြန်လျော်ရမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒဟာ လက်တွေ့မှာ တရားစီရင်ရေးကို လုပ်စား တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အသုံးခံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမှန်တကယ် လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အဖြစ်က ဖြိပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရက်စက်မှုဆတွေကို သင်ကြားပေးနေတရွေ့ ဒါမျိုးဆက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျနော်တို့ ဆီမှာ အဲဒါမျိုးမရှိတာပဲကြည့်ပါ။
မြန်မာခရစ်ယာန်တွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေကို ပိုမိုခင်မင်ကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတာ God ကိုးကွယ်တာခြင်းတူလို့တဲ့။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာကလဲ လိမ်ပြောတာ သိပ်ကိုတော်တယ် မဟုတ်ပါလား။ တကယ်တော့ God နဲ့ Allah မတူဘူးဆိုပြီး ခရစ်ယာန် ဘုံးကြီးတွေက အမြဲငြင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ခရစ်ယာန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ မသတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်မိန်းခလေးတွေကို လက်ထပ်ယူရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် အတင်း မပြောင်းခိုင်းပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ မွတ်ဆလင်ထက် ခရစ်ယာန်တွေအပေါ်မှာ အများကြီးသက်ညှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်တွေက မွတ်ဆလင်တွေကို ပိုမိုခင်မင်မြဲပါပဲ။
အခုလည်းကြည့်ပါ မွတ်ဆလင်မတွေဟာ အနှိမ်ခံတွေပါ။ အနှိမ်ခံဆိုပေမယ့် သူတို့ဟာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်က လူသတ်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ဖခင်လိုပဲ မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်း မိမိရဲ့ သားသမီးအရင်းကိုပင် ပြန်သတ်ပါတယ်။ အခုဗီဒီယိုမှာဆိုရင် အမေအရင်းဖြစ်သူက သားကို ခရစ်ယာန်ပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက် သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ခရစ်ယာန်ကို ဘယ်လောက်အထိ မုံန်းလဲ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့တာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ကဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် တွေမှာ အဲလိုအမေ မျိုးကြားဖူးပါသလား? စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။
မွတ်ဆလင် ရက်စက်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်သည့် နောက်ထပ် ဗီဒီယိုနှင့်ဆောင်းပါးများ
Islamic Practices That Demean Women & Abuse Girls
Bangladesh: Land of "rampant" acid attacks
Gaza: acid thrown in face of woman dressed "immodestly"
Pakistan: Woman dies from acid burns
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:28 AM